Fundisa izingane - iBezzia | Bezzia
Fundisa izingane Kuyisici esibaluleke kakhulu empilweni yabazali, ngoba kwesinye isikhathi kunzima ukukuthola kahle. Yingakho kusuka eBezzia sikunikeza izeluleko zokufundisa izingane zakho futhi sizobhekana nezinkinga ezinjengokuvikelwa ngokweqile, ukusetshenziswa kwe-Intanethi epaki lezingane noma impilo yomndeni.
Ngokufanayo, sizogcizelela ubukhona be imithetho kwezemfundo kodwa futhi nezinye izindinganiso ezinjengokubekezela, inhlonipho noma uzwela, ngoba imfundo iyingxenye yezinto ezimbili futhi singenza njalo okunye ukwenza izinto zihambe kahle.
“Inhloso yemfundo ukwenza izingane zifune ukwenza okufanele zikwenze,” kusho uHoward Gardner. Sizozama lokho.
Iyini imiphumela yokushaya ingane
Yize ukushaya ingane kungakaze kubukelwe phansi, iqiniso ukuthi ukujeziswa ngokomzimba ...
Ukungajabuli kwabazali kungazithinta kanjani izingane ngokomzwelo
Izingane kufanele zikhulele enjabulweni ephelele kakhulu futhi ziqhelelane nalezo zimo ezingakhi inhlala-kahle ...
Ngeshwa, ubuhlungu nokuhlupheka kuyingxenye yempilo futhi kubalulekile ukwazi ukuthi ungabhekana kanjani nakho ...
Por UMaria Jose Roldan kwenza Izinyanga ze-4 .
Kuyaqabukela ukuthola umzali obonayo ukuthi unobuthi enganeni yakhe nokuthi umzali unikeze ...
Akekho umzali othanda ukuvuma ukuthi ingane yakhe yonakele futhi ayitholi imfundo efanele. Ngaphandle…
Imishwana emi-5 okufanele uyisho enganeni yakho
Por UMaria Jose Roldan kwenza Izinyanga ze-5 .
Uma kukhulunywa ngokukhulisa ingane, amagama abaluleke njengemizwa yakho. Abazali abaningi ...
I-syndrome yengane enesipho esikhulu
Por UMaria Jose Roldan kwenza Izinyanga ze-7 .
Sonke besiyizingane futhi kunezinto ezimbalwa ezijabulisa kakhulu kulokhu kuphila ngaphandle kokubhalela incwadi ...
Ubungozi bokufundisa ngokumemeza
Por UMaria Jose Roldan kwenza Izinyanga ze-8 .
Kuvamile ukuthi abazali bathethise izingane zabo ngokuziphatha okungafanele noma ngokuziphatha okubi. I…
Yini okufanele uyenze uma izingane zilwa ngaso sonke isikhathi
Enye yezinto ezimbi kakhulu kubazali ukubona izingane zabo ziqhubeka zilwa. Kujwayelekile ukuthi ...
Ukubaluleka komndeni njengendlela yokuvikela ukulwa nokuxhashazwa
Ukuqinela abanye kuyisihlava salo mphakathi okumele kugwenywe futhi kuqedwe ngokushesha. Iphepha le…